कसरी अक्षरलेखन सुधार्ने आफ्नो बच्चाको ? यस्ता छन् उपाय -
५ जेष्ठ २०७६, आईतवार २०:३७ May 19, 2019 mophasalLeaveaComment on कसरी अक्षरलेखन सुधार्ने आफ्नो बच्चाको ? यस्ता छन् उपाय
बाल्यकालको व्यायामले मोटोपन र क्यान्सरको सम्भावना कम हुन्छ । आफ्ना बच्चालाई व्यायाम गराउँनुहोस ।
शिक्षामा ‘पहिले मित्रता र त्यसपछि मात्र स्पर्धाको नीति लागु गराउने
किनभने विद्यालयमा बालबालिकाले एक किसिमको दवाव महसुष गर्छन् । उनीहरुले त्यहाँ जानु, पढ्नुलाई फरक कामको रुपमा लिन्छन् । जबकी त्यही बच्चा कुनै पार्क वा खेलमैदानमा र्पुयाइने हो भने खुसीले उफ्रिन्छन् । त्यसो भए विद्यालय एवं कक्षा कोठालाई किन त्यस्तो नबनाउने, जहाँ प्रवेश गर्दा विद्यार्थी फुरुंग होस् ।
नोटस् माथि उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरु विभिन्न अनलाइन तथा पत्र(पत्रिकाहरुबाट साभार गरिएको हो । साथै तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो ? हाम्रो जानकारीहरु अरुलाई पनि देखाउन कृपया सेयर गर्नुहोला । तपाइको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नेछ
अहालिया एक्सचेन्जले उपहार दियो , खगेन्द्रश्वर कडेलले पाए कार उपहार
५ कार्तिक २०७३, शुक्रबार १७:०१ October 21, 2016 wwwmophasal